Soo dejisan eScan Total Security Suite 14.0.1400.2228 – Vessoft
WindowsAmnigaDifaac guudeScan Total Security Suite
Bogga rasmiga ah: eScan Total Security Suite
eScan Total Security Suite – xakameyn buuxda ee ilaalinta antivirus iyo ilaalinta kombiyuutarka waqtiga dhabta ah ee ka soo horjeeda hanjabaadyo kala duwan. Nabadgelyada laba-dirxiga waxay sifeeyaan shabakada shabakada shabakadda waxayna ka ilaalisaa shabakadaha weerarka, iyo shaqaaleynta ilaalinta aqoonsiga waxay ka hortagtaa bixinta macluumaadka muhiimka ah ee gaarka ah. eScan Total Security Suite waxay taageertaa teknoolajiyada daruuriga ah waxayna adeegsataa qalabka ciribtirka leh ee ciribtirka leh si looga badbaado ugu badnaan hanjabaad cusub ama aan la aqoon. eScan Total Security Suite waxay bixisaa difaac internet ah oo ka dhan ah bogagga shabakada phishing, URL-yada xun, spam iyo walxaha khatarta ah ee emails, iyo ilaalinta deegaanka ee faylasha iyo faylasha ka dhanka ah fayrasyada, nacfiyada iyo ransomware. Kantaroolka ilaalinta waalidka ee la dhisay ayaa filaya internetka oo la isweydiiyo oo xadidaya wakhtiga ay kharashka ku bixiyaan carruurta websurfayn sida waafaqsan goobaha. eScan Total Security Suite waxay ka kooban tahay dhowr qalab oo dheeraad ah, sida scanner vulnerator, nadiifinta diiwaanka, nadiifinta diiwaanka, iyo qalab ilaalin firfircoon oo loogu talagalay aaladaha USB-ka kuwaas oo ku siinaya inaad dajiso xeerarkaaga iyo xaddidaadyada qalabka la qaadi karo si looga hortago khatarta walxaha laga helo helitaanka kombiyuutarkaaga.
Ka ilaalinta fayraska, hindhistaha, phishing, spam
Ilaalinta shabakada iyo shaandheynta URL-yada khatarta ah
Nidaamka looxiray ee lagu rakibay sir-ilaaliyaha
Soo dejisan eScan Total Security Suite
Faallo ku saabsan eScan Total Security Suite
eScan Total Security Suite Xirfadaha la xiriira